Hello Nepal News » सिजनको पहिलो खेलमा टोटनह्याम आफ्नै घरमा पराजित : एभर्टन बन्यो भिलेन !
सिजनको पहिलो खेलमा टोटनह्याम आफ्नै घरमा पराजित : एभर्टन बन्यो भिलेन !
जोसे मोउरिन्होको कमान्डमा रहेको इंग्लिस क्लब टोटनह्यामले घरेलु प्रिमियर लिग फुटबलको नयाँ सिजन २०२०–२१ को सुरुआत हारबाट गरेको छ । आज आइतबार राति भएको सिजनको पहिलो खेलमा टोटनह्यामलाई उसकै घरमा कार्लेस एन्सलोट्टीको पाहुना टोली एभर्टनले ०–१ को हार चखायो ।
लिगका दुई बलिया टोलीको रोमाञ्चक भिडन्तमा मात्रै १ गोल भयो । अन्ततः हार–जितका लागि सोही १ गोल नै निर्णायक बन्यो । टोटनह्यामले सिजनको पहिलो खेलमा सबै प्रमुख खेलाडी उतारे पनि गोल खाएपछि कमब्याक गर्न नसक्दा सिजनको पहिलो खेलमै नमिठो हार भोग्न बाध्य भयो ।
टोटनह्यामको घरमा एभर्टनले रक्षात्मक र आक्रामक दुवै हिसाबले उत्कृष्ट खेलेको थियो । एभर्टनका लागि खेलको ५५औं मिनेटमा डोमिनिक काल्भर्ट लेविनले गरेको १ मात्रै गोल जितका लागि पर्याप्त बन्यो । लुकास डिग्नेले हानेको फ्रि किक प्रहारमा बक्समा रहेका लेविनले सहजै हेडिङमार्फत् गोल गरेका थिए ।
सो गोल खाएपछि घरेलु टोली टोटनह्याम खेलमा फर्किन सकेन । र, खेल एभर्टनले ०–१ ले जित्यो । आफ्नो घरमा टोटनह्यामले कूल ९ आक्रमण बुन्दा ५ प्रहार टार्गेटमा हानेको थियो । यता, पाहुना टोली एभर्टनले कूल १५ आक्रमण बुन्दा ४ प्रहार टार्गेटमा हानेको थियो । टोटनह्यामले बल ५२ प्रतिशत आफ्नो पक्षमा राखे पनि गतिला मुभ बनाउन सकेन ।
एभर्टनका नयाँ खेलाडी हामेस रोड्रिग्वेजको डेब्यु खेल सुखद् रह्यो । उनले व्यक्तिगत रूपमा डेब्यु खेलमा उच्च प्रदर्शन गर्दै टिमलाई जिताउन सघाए । उनलाई खेलको अन्तिम समयमा सब्सिच्युट गरिएको थियो ।
अब यो जितसँगै एभर्टनले पहिलो खेल जित्दै ३ अंकसहित छैटौं स्थानमा छ । पहिलो चरणको खेलपछि ६ टिमले शतप्रतिशत जित निकालेका छन् । केही टिमले आफ्नो पहिलो खेल खेल्न बाँकी छ । पराजित टोटनहयाम १७औं स्थानमा छ । आर्सनल गोलअन्तरका आधारमा सबैभन्दा शीर्ष स्थानमा छ ।
प्रकाशित मिति २८ भाद्र २०७७, आईतवार १७:०८